Sofia Richie Anotungamira Pamberi peJet Shamwari Yakanakisisa 'Kylie Jenner - Macelebs
Kuru Style Blog Varaidzo Nhau
Sofia Richie Anotungamira Pamberi peJet Ine 'Shamwari Yakanakisisa' Kylie Jenner
Sofia Richie uye Kylie Jenner Hushamwari hwakanakisisa hwaenda.
ndiani aive brandi glanville akaroora
Nguva pfupi apedza kuzivisa bhirionea wezvemabhizimusi uye wechokwadi nyeredzi yake 'shamwari yepamwoyo,' Sofia Richie akapemberera kupera kwake makumi maviri nerimwe st kupemberera zuva rekuzvarwa muLas Vegas nekugovana pikicha yevaviri, pamwe chete nevamwe vashoma vegal gal, vachimira pamberi pejeti yega.
Yakanakisisa 21st musikana angabvunza! Gadzirira imwe spam yakakomba
Chinyorwa chakagovaniswa na Sofia Richie (@sofiarichie) musi waAug 30, 2019 pa12: 44 pm PDT
'Yakanakisisa 21st musikana angabvunza! Gadzirira imwe spam yakaipa, 'akanyora kudaro
Pakutanga kwezuva, Kylie akatumira vhidhiyo 'yekurasa' kubva kune yake 22ndzuva rekuzvarwa extravaganza, raive nemamessage kubva kushamwari uye mhuri, kusanganisira Richie.
Kudzosera kumashure kune rwakanakisa rwendo rwehupenyu hwangu !!! Ndinoshuva dai ndaigona kutendeuka nguva ndatenda @amberasaly yeiyi vhidhiyo.
Chinyorwa chakagovaniswa na Kylie (@kyliejenner) pana Aug 30, 2019 pa11: 22 am PDT
keshia knight pulliam uye ed hartwell
'Kylie une makore 22, uye wagara uri gore rimwe unotonhorera kupfuura ini,' akadaro. 'Asi ndinokuda, ndiwe shamwari yangu yepamwoyo. Handizive kuti hupenyu hungadai hwakaita sei iwe usipo. '
Sofia Sofia kumhuri yeKardashian inomhanya zvakadzama. Pamusoro pekuve Kylie's BFF, pane mukana waanogona kuve amai vokurera vemukoma nemukoma waKylie, sezvo anga achidanana nemukoma wake, Kourtney Kardashian aimbova Scott Disick - uyo achangopfuura kumupa chipo Aston Martin kwezuva rake rekuzvarwa - kweanopfuura makore maviri.
Nepo Sofia naKylie vachizivana kwemakore, vangangodaro vakaswedera mumwedzi yapfuura. Kutanga, nekuti mutambo weScott naKourtney wese wafa, uye chechipiri, kubvira shamwari yaKylie yepamwoyo ichangobva kuvhurwa, nekuda kweJordyn Woods / Khloe Kardashian kubiridzira.
Chinyorwa chakagovaniswa na Sofia Richie (@sofiarichie) pana Jul 16, 2019 pa11: 50 am PDT
'Kylie naSofia vagara vachimhanya mudenderedzwa rimwe chete uye vari padhuze nezera, saka vakabatana zvakanyanya mumakore. Vakagara vari mukurumbira, vakararama hupenyu hwakafanana uye vakakurira mukati mevanhu vazhinji, 'sosi ichangobva kutaurwa. US . 'Ivo vasvika zvakanyanya padhuze nepadiki manje apo mutambo weKourtney, Scott naSofia wafa. Pakangotamba mutambo pakati paKourtney naSofia, Kylie akanzwa kusununguka kupedza nguva yemusikana naSofia zvakare. '
Adriana Lima uye mukomana weTurkey Metin Hara havana kuzoputsa mushure mezvose
Jenelle Evans, ex David Eason akaonekwa pamwechete muNashville: Vadzoka here?
Blac Chyna anonzi anosheedza Kim Kardashian 'musikana anoreva' weV-Day stunt
Anderson Cooper anopika kutsiva kuna Andy Cohen yemifananidzo isina hembe
Rory Feek achiri kupfeka ringi yake yemuchato makore maviri mushure mekunge Joey Feek apfuura
shahs yekuvira kwezuva asa mucheche
ndiani Eriya huni kudanana
rarama na kelly uye michael ratings inodonha
taraji p henson akaroora
vari jennifer garner na ben affleck vadzokerane
heidi klum ane vana vangani